Rivo Rakotovao : “Andry Rajoelina no nampahantra ny firenena” -
AccueilRaharaham-pirenenaRivo Rakotovao : “Andry Rajoelina no nampahantra ny firenena”
Hitam-poko, hitam-pirenena ankehitriny fa ny fitondrana Tetezamita no nampitotongana ny fari-piainan’ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Tsy vitan’ny tamin’ireo renivohi-paritany ihany fa tafapaka hatrany amin’ny tontolo ambanivohitra ny fampahantrana vahoaka tamin’ny fitondran’i Andry Rajoelina.
Voamarina mantsy, araka ny fanazavana azo tamin’ny minisi-panjakana Rivo Rakotovao fa tsy nisy nataon’ny fitondrana Tetezamita ho amin’ny fampandrosoana mihitsy tamin’ny fotoan’androny. Tsy nisy, araka ny fampanantenan’i Andry Rajoelina sy ny ekipany, ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka, sns. Vao mainka aza niha nilentika ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka.
Simba tanteraka ny fiainam-pirenena hatrany ambanivohitra rehetra tany noho ilay fampanantenana poakaty sy ilay nanaovana ampihimamba ny volam-bahoaka sy ny harem-pirenena.
Efa tsy afaka am-bavan’ny maro intsony ary efa nivoaka an-gazety teto ihany koa fa mpiray tsikombakomba tamin’ny fambotriana ny firenena i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga. Izy roalahy ireto no tena nihinam-be tamin’ireny fotoanan’ny fitondrana Tetezamita ireny. Betsaka ny fanodinkodinam-bolam-panjakana, maro tsy ho voatanisa ihany koa ny halatra isan-tokony nataon’izy ireo, sns. Hany ka kenda roroka ny firenena ary sempotra ny vahoaka. Tsy afa-nivelatra sy nigalabona tamin’ny fiainany andavanandro intsony ny mponina fa zary lasa fitaintainan-dava no iainan’izy ireo noho ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Tapitra nikatona avokoa ireo orinasa afaka haba, izay niteraka asa maro ho an’ny mponina, tsy ny teto an-drenivohitra ihany fa ireo avy any ambanivohitra ihany koa aza namonjy asa tamin’izy ireny.
Ankehitriny, noezahin’ny Fitondram-panjakana ary laharam-pahamehan’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina ny famerenana amin’ny laoniny ny fiainam-bahoaka sy ny toe-karen’i Madagasikara. Anisan’izany ny famerenana ny fitokisan’ny mpamatsy vola ka nahafahana namerina indray ny AGOA, ny nahazoana famatsiana 10 miliara Dolara tamin’ny fihaonan’ny mpamatsy vola tany Parisy, Frantsa, ny fananganana fotodrafitrasa maro isan-karazany, sns. Noho izany, tsy nataon’ny fanjakana ankehitriny ambanin-javatra ny fampandrosoana.
Tsy mitsahatra ny mitady ny tetikady rehetra ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery entina hampandrosoana ny firenena. Ary mandray ny soso-kevitra rehetra omena azy. Ao anatin’izay indrindra, nandray ireo tanora Kristianina misehatra ho amin’ny fampandrosoana ...Tohiny